Ukuguquka kwesimo sezulu sekuvele kushintshe ukuhamba kwemifula nezikhukhula eYurophu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngemuva kokuhlaziya amakhulu ezinkulungwane zamarekhodi, kuphothulwe ukuthi Izikhukhula eYurophu zenzeka ezinyangeni ezimbili ngaphambi kweminyaka engama-2 edlule. INortheast Europe kanye nendawo ye-Atlantic kuyathinteka kulokhu. Futhi ngokuhlukile, izindawo zoLwandle lwaseNyakatho nezindawo ezinkulu zezikhukhula zoLwandle iMedithera zenzeka ngemuva kwenyanga nengxenye. Yize lokhu kwehluka "kujwayelekile" ngenxa yohlobo lwezimbangela ezisheshayo esifundeni ngasinye, isimo sezulu sidlala indima enkulu. Ucwaningo lubandakanya ososayensi abangama-50 abafunde amarekhodi eziteshi cishe ezingama-4.262 ze-hydrometric.
Elinye lamaphuzu abalulekile ahlaziyiwe kube ukugeleza kwamanzi omfula. Ngokubheka iphuzu eliphakeme kakhulu asebefinyelele kulo, futhi kusukela ngonyaka we-1960. Isikhukhula saminyaka yonke siye sabonwa emifuleni kusukela lapho. Ingqikithi ye- Kwabhalwa amarekhodi angama-200.000 ebalazweni, okwenza ukungafani kahle kwale minyaka engama-50 edlule kubonakale futhi kubonakale.
1 Iziphetho ezithathwe ocwaningweni
1.1 Izinguquko ezinkulu kakhulu ezirekhodiwe
2 Ukulahleka kwezomnotho njengomphumela wokungalingani kokugeleza nezikhukhula
Iziphetho ezithathwe ocwaningweni
USolwazi Gunter Blöschl, umbhali oholayo wocwaningo, waseVienna University of Technology, e-Austria, uyaqinisekisa ngala mazwi: "Umphumela uwukuthi, impela, ukushintsha kwesimo sezulu kuthinte isikhathi sezikhukhula, kodwa sikwenze ngendlela ehlukile ezifundeni ezahlukene zase-Europe."
Phakathi kwezinguquko ezisobala, kungaphawulwa ukuthi ezifundeni ezinamakhaza kakhulu ezwenikazi, njengasenyakatho nasempumalanga, ukugcwala kwemifula kwenzeka entwasahlobo nasehlobo ngokuncibilika kweqhwa. Eningizimu, isibonelo, ukugeleza kukhule kakhulu ebusika, okuyilapho imvula ina kakhulu. Ukwanda kwamazinga okushisa kubangele ukuthi ukuncibilika kwenzeke ngaphambili. Ngakho-ke, ukwanda kokugeleza enyakatho-mpumalanga yeYurophu sekuthuthuke kakhulu. Isifunda ngasinye, kuya ngamaxhaphozi, uma kungokwethambeka i-Atlantic, nezinye izici ezahlukahlukene, zibangele ukuthi ziguqulwe ngokuqaphelekayo nangendlela ebunyeni esifundeni ngasinye.
Izinguquko ezinkulu kakhulu ezirekhodiwe
Zitholakele eNtshonalanga Yurophu, ngasogwini lwaseNyakatho ye-Atlantic. Ukusuka ePortugal kuya eNgilandi, ngaphezu kuka Ama-50% eziteshi akhombisa kusengaphambili okungenani izinsuku eziyi-15 kuzikhukhula. Kulawa, ama-36% akhombise izinguquko ezingaphezu kwezinsuku ezingama-36, kule minyaka engama-50 kwahlaziywa.
Ubufakazi obungenakuphikiswa obungagcini nje ngokuguqula isimo sezulu, kodwa futhi obuthinta imvelo uqobo, encike ngqo kwisimo sezulu. Futhi ngalokhu, izifunda zezolimo nokukhiqizwa kwamandla nakho kuyathinteka.
Ukulahleka kwezomnotho njengomphumela wokungalingani kokugeleza nezikhukhula
Ababhali balolu cwaningo bathi kwezinye izindawo sekuvele izinguquko ezinqala ezithinta imikhakha ethembele kulo. Emhlabeni jikelele, kulinganiselwa ukuthi inani lokulahleka emikhakheni yezolimo namandla kufinyelela ku- $ 104.000 billion ngonyaka. Isici esiyinhloko esithinta abantu abaningi emhlabeni wonke yizikhukhula. Ngenxa yokukhula komnotho kanye nokuguquka kwesimo sezulu, ukulahlekelwa kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokwanda kuya phambili.
Umthelela wezikhukhula kwezemvelo nakwezomnotho kungasho ukuthi, emiphakathini nasezinhlelweni zemvelo ebezivele zilungisiwe ukuthi zenzeke ngesikhathi esithile, zikwenza kwenye. Okungafika kungekudala noma kamuva kunganciphisa ukukhiqizwa kwezolimo ngokuthinta izitshalo ezithile. Futhi zingathinta inani elincane lamanzi atholakalayo kwezolimo eziniselwayo futhi kugugule nenhlabathi. Lezi zinguquko zingashintsha futhi ukukhiqizwa kwamandla we-hydraulic noma ukunikezwa kwamanzi okuphuza kubantu bezifunda.
Ukwanda okujwayelekile kwamazinga okushisa kudala ukuthi isimo sezulu njengoba besaziwa, kancane kancane kufanele sibuyekezwe. Izimo zemvelo azisenzeki ezikhathini zesikhathi ezazivame ukwenzeka ngazo, futhi izinhlekelele zemvelo ziya ngokuya ziba zimbi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu sekuvele kushintshe ukuhamba kwemifula nezikhukhula eYurophu